Ukutadisha inkinga sizogxila imisebenzi bengqondo abaningi bezinye izizwe kanye yasekhaya. Phakathi yokugcina babesebenza kulo magazini abacwaningi ezifana S. L. Rubinshteyn, D. N. Uznadze, VA Ivannikov.
Izinhlobo nezenzo zomuntu
Ukuze uqonde ukuthi yini isakhiwo isenzo, kubalulekile ukuchaza kakhulu umcabango we intando. Intando - yikhono umuntu angakwazi ukulawula indlela aziphatha yakhe, naphezu kwalezi zinselele zangaphakathi nezangaphandle ezibhekene kophiko lwayo. Iqiniso lokuthi yonke indoda izimisele yesenzo zingahlukaniswa izigaba ezimbili ezibanzi: yokuzithandela futhi okungalindelekile. Iqembu yokugcina kuhlanganisa labo okwenzeka ngaphandle iqhaza kwi ingxenye ukulawula ingqondo: isibonelo, isazela, nemvelo esingokwemvelo, ikhaliphe unconditioned noma izenzo uzibophezele ekutheni izwe liphathwe ibutho injabulo kakhulu (kuthinte). izenzo ngokungenasizathu - nalezo umuntu wenza, esekelwe izinqumo zazo: basuke nje isuke ibangelwa intando yakhe futhi ayaqalwa iqhaza ekufeni.
Algorithm S. L. Rubinshteyna
Ukwakheka wakhetha ithuthukiswe ososayensi Russian S. L. Rubinstein, kuhlanganisa izinyathelo eziningana. Isigaba sokuqala - nje isisusa afeze izenzo, sifaka oyinhloko goal setting. Isinyathelo sesibili siwukuthi samanje esimweni ngasinye. Sici Its sici kuyimpi izisusa. Man subjectively Kuhlola ukulahlekelwa kungenzeka ukuthi ingenza umuntu abe nethala algorithm ezihlukahlukene yezenzo. Isigaba sesithathu - turning. Lokhu ukuzinikela. Esigabeni yokugcina S. L. Rubinshteynu - lokhu ukusebenza.
Nokho, abanye abacwaningi ukungezwa kule scheme has izigaba eziningana Lesisemkhatsini. Ukwakheka wakhetha ngeke zibandakanya nginqobe ubunzima ekufezeni, futhi babancome, ngemva target ifinyelelwe.
Enye ingxenye ebalulekile isiqondiso volitional
Nokho, isenzo kwengqondo isakhiwo akuyona nje ukulandelana izenzo, echaza ukuqaliswa samuntu ethile yokuziphatha. Uma kukhona izithiyo ezithile ukuze kufezwe inhloso ukuphatha ukuziphatha kwabo kuxhomeke endleleni ithuthukiswe sinezimfanelo ezithile zomuntu. Lezi zihlanganisa nokuzithiba, ukuzimisela, amandla, ukuphikelela nokuthembela isibindi. Ngakho-ke, abanye abacwaningi abathi ngokwezinga unake okukhethekile, kanye nezinye izingxenye, okuyinto has a isakhiwo isenzo. Ngokwesibonelo, umthelela ezinkulu ekuziphatheni komuntu etimeni letehlukene has ingxenye yobuchopho.
Okwenzeka A. V Zaporozhtsa
Ucwaningo kakhulu likhombisa ngokwenza amandla lesi senzo owenziwa AV Zaporozhets. Izifundo banikezwa isabelo ukuthi siphakamise izinsimbi ezisindayo. Lonke isampula zihlukaniswe amaqembu amathathu.
Isigaba sokuqala sihlanganisa ngalezo zindaba ababenolwazi umsebenzi ukwenza, ngaphandle iziyalezo ezengeziwe nobe tinchazelo a.
Abahlanganyeli iqembu lesibili watshelwa ukuthi ngokuvusa isisindo esindayo, kufanele usethe irekhodi lakho siqu.
Futhi ekugcineni, iqembu lesithathu lalinabashumayeli labo epha incazelo engajwayelekile lo msebenzi. Batshelwa ukuthi ngu nokuphakamisa izinsimbi, bona ngaleyo ndlela ukukhiqiza kagesi ugesi kuleli dolobha.
Ngakho-ke waqala enye kwalokho abalulekile, okuyinto has a isakhiwo wakhetha kwengqondo. ISIBONELO lwabonisa ukuthi ukuqaliswa isenzo phuzu elibalulekile yalesi senzo. Ngamanye amazwi, lo mseshi wavulwa engqondweni yethu ingxenye isiqondiso volitional.
Imvelo isicelo zocwaningo ngeke
Sakhiwo isenzo kwengqondo - yisici ucwaningo osetshenziswayo. Imiphumela etholwe ososayensi, ingasetshenziswa ezicini eziningi zokuphila ezihlukahlukene. Lokhu Psychology yomsebenzi, ezemidlalo, imfundo, umndeni kwengqondo. Imiphumela etholwe ososayensi, kungasetshenziswa by ochwepheshe Ukwelulekwa nalabo abanentshisekelo intando kanye nogqozi.
isiphetho esithakazelisayo kwaba abacwaningi Russian V A. Ivannikovym. Emsebenzini wabo, ososayensi baye babonisa: nesifiso sokufuna yesenzo ifaka hhayi kuphela nokuntuleka motif yasekuqaleni. isiqondiso Volitional nayo eyenziwa ngesikhathi kumiswa ugqozi, omunye lapho lalingekho ekuqaleni, kuphela uma le ndaba unquma ukuthatha isenzo esithile.
Experience A. I. Lipkinoy: isiqondiso volitional nezinqubo zemfundo
Ngezindlela eziningi ukutholakala Indlela esenziwa A. I. Lipkinoy. Ixhumeke nge izici yenqubo yokufunda. izifundo zakhe futhi baye matasa indawo ekhethekile isakhiwo isenzo kwengqondo. Kafushane isipiliyoni Lipkin kanje. Labo bafundi ababenolwazi abampofu ukusebenza esikoleni, wacela isikhathi ukuthatha ukusekelwa phezu abafundi sibuthakathaka. Ukuhambisa komunye indima komunye, laba bafundi baqala amamaki angcono, bakhombise ukuzimisela okukhulu ukufunda.
Kodwa ngaphezu ibe nezimfanelo ezinhle ensimini cwaningo futhi sizosebenza izimfanelo ezimbi volitional. Lezi zihlanganisa inkani, ukuhambisana kanye impulsivity. Inkani has kancane kakhulu ukukwenza nomthethonqubo izinqubo ukuziphatha volitional. It sihlotshaniswa bezibona ukungadli ngokoqobo. Impulsiveness - ukuziphatha kubangelwa imizwa, okuyinto njalo kancane zaqala ukusetshenziswa ngo ngokushesha. Ukuhambisana kuyinto yinye nesikhathi: umuntu onaleli izinga, Kulula ukushintsha ingqondo yakho, yokuvumela ithonya imibono yabanye abantu.
Nazi izinhlobo abalingisi kanye nesicelo ewusizo ngamunye wabo
Simbirskaya archdiocese. Ihlose, isakhiwo kanye nemisebenzi
Muffin nge banana: isinyathelo ngesinyathelo recipe ngezithombe